Tsy irery i Jesosy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Tsy irery i Jesosy
Nisy mpanakorontana iray maty teo amin'ny hazofijaliana teo amin'ny havoana misy manda any ivelan'i Jerosalema. Tsy irery izy. Tsy izy irery no nanakorontana tao Jerosalema tamin'ny andro lohataona.
“Voahombo miaraka amin’i Kristy amin’ny hazo fijaliana aho”, hoy ny nosoratan’ny apostoly Paoly (Galatiana 2,20), fa tsy i Paoly irery. “Niara-maty tamin’i Kristy ianareo”, hoy izy tamin’ny Kristianina hafa (Kolosiana 2,20). “Niara-nalevina taminy isika” hoy izy nanoratra ho an’ny Romana (Romana 6,4). Inona no mitranga eto? Ireo olona rehetra ireo dia tsy tena teo amin’io havoana tao Jerosalema io. Inona no resahin’i Paoly eto? Ny kristiana rehetra, na fantany na tsia, dia manana anjara amin’ny hazo fijalian’i Kristy.
Tao ve ianao rehefa nanomboana an'i Jesoa tamin'ny hazo fijaliana? Raha kristiana ianao dia eny ny valiny hoe eny, teo ianao. Izahay dia niaraka taminy na dia tsy nahalala azy tamin'izany fotoana izany aza izahay. Mety ho toa tsy misy dikany izany. Inona no tena dikan'izany? Amin'ny fiteny maoderina dia milaza isika fa miaraka amin'i Jesosy. Izahay dia manaiky azy ho solontenantsika. Manaiky ny fahafatesany ho tambin'ny fahotantsika isika.
Tsy izay ihany anefa. Isika koa dia manaiky - ary mandray anjara - amin'ny fitsanganany amin'ny maty! “Andriamanitra niara-natsangany taminy” (Efes 2,6). Teo izahay ny marainan’ny fitsanganana amin’ny maty. “Andriamanitra niara-namelona anareo taminy” (Kolosiana 2,13). “Niara-nitsangana tamin’i Kristy hianareo” (Kolosiana 3,1).
Ny tantaran'i Kristy no tantarantsika raha ekentsika, raha manaiky isika hamantatra miaraka amin'ny Tompontsika voahombo tamin'ny hazofijaliana. Mifandraika amin'ny fiainany ny fiainantsika, tsy ny voninahitry ny fitsanganana amin'ny maty ihany fa ny fanaintainana sy ny fijalian'ny hazo fijaliana. Afaka manaiky azy io Afaka miaraka amin'i Kristy amin'ny fahafatesany ve isika? Raha manamafy izany isika dia mety ho lavorary miaraka aminy koa isika.
Tsy nanao afa-tsy ny maty fotsiny i Jesosy ary hitsangana indray. Niaina fiainana amin'ny fahamarinana izy ary mandray anjara amin'ity fiainana ity koa isika. Mazava ho azy fa tsy lavorary isika - na dia tsy lavorary tsikelikely aza - fa nantsoina handray anjara amin'ny fiainana vaovao sy be tondran'i Kristy isika. Mamintina izany rehetra izany i Paoly rehefa nanoratra hoe: "Koa alevina miaraka aminy isika amin'ny alàlan'ny batisa ho amin'ny fahafatesana, mba hahafahantsika toa an'i Kristy natsangana tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny Ray koa, dia afaka handeha amin'ny fiainana vaovao koa isika." Miara-mandevina aminy, niara-natsangana taminy niara-nipetraka taminy.
Tokony ho tahaka ny ahoana izao fiainana vaovao izao? «Ary ianao koa dia mino fa matin'ny ota ianao, ary Andriamanitra velona ao amin'i Kristy Jesosy. Koa aza avela hanjaka amin’ny tenanareo mety maty ny ota, ary aza manaiky ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin’ny ota ho fiadian’ny tsi-fahamarinana, fa atolory ny tenanareo ho an’Andriamanitra, toy ny efa maty ka mbola velona ankehitriny, ary atolory an’Andriamanitra ny momba ny tenanareo ho fiadian’ny fahamarinana” (and 11-13).
Rehefa mifandray amin’i Jesoa Kristy isika dia Azy ny fiainantsika. “Resy lahatra izahay fa raha maty ho an’ny rehetra ny iray dia maty avokoa izy rehetra. Ary izany no nahafatesany ho an’ny olona rehetra, mba tsy ho velona ho an’ny tenany intsony izay monina eo, fa ho an’ilay efa maty sy nitsangana hamonjy azy.”2. Korintiana 5,14- iray).
Tahaka ny tsy irery i Jesosy dia tsy irery isika. Raha fantatsika miaraka amin'i Kristy dia halevina miaraka aminy isika, dia hitsangana amin'ny fiainam-baovao miaraka aminy ary Izy dia velona amintsika. Miaraka amintsika Izy amin'ny fitsapana sy ny fahombiazantsika satria azy ny fiainantsika. Averina ny vesatra ary mahazo fankatoavana izy ary mahatsapa ny fifaliana mizara ny fiainany aminy.
Hoy i Paoly: “Nohombo niaraka tamin’i Kristy tamin’ny hazo fijaliana aho. Izaho velona, ​​nefa tsy izaho ankehitriny, fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ny nofo dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy » (Galatiana . 2,20).
"Ento ny hazofijaliana" hoy i Jesoa tamin'ny mpianany, ary manaraha ahy. Fantaro ny tenanao amiko. Avelao hohomboana amin'ny hazo fijaliana ny fiainana taloha ary ny fiainana vaovao hanjaka amin'ny vatanao. Avelao hitranga amin'ny alalako. Avelao aho hiaina ao aminao ary hanome anao fiainana mandrakizay. »
Raha mametraka ny mahaizy antsika ao amin'i Kristy isika dia hiaraka aminy amin'ny fijaliany sy ny fifaliantsika.